कुन दिन कति स्तन बढे भनेर जान्नु किन पर्यो यो समाजलाई ! « Sansar News
कुन दिन कति स्तन बढे भनेर जान्नु किन पर्यो यो समाजलाई !
७ पुष २०७३, बिहीबार ०६:१४
मेरो माइत र घर दुवै तिर महिनावारी बार्ने चलन थियो । माइतमा मैले अक्सर आमालाई पेल्थेँ । बारे पनि न बारे बराबर बनाउँथे । तर घर गएपछि समस्या पर्यो र म दोधारमा परेँ । काठमान्डू डेरामा हुँदा नबार्ने भएकोले घर पुगेपछि पनि सकेसम्म लुकाउने गर्थेँ । तर मेरी सासु आमालाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । सिधै मुखले भन्नु हुन्थेन तर मलाइ हरेक पटक घर गयो कि कान्छी नानी देखाएर “लु है कोइ पन्छेका आइमाइ छौ भने कसैलाई नछोओ । भान्सा चोखो राखो । यतातिर माथितिर (चुलो) नआओ तिमेरका त कत्ती भर छैन । छोइछारो भयो भने बा लगलग लगलग काम्नुहुन्छ । बाका शरिराँ देउता चढ्छन् ।” आमाले यसो भनेपछि कान्छी नानी र म मरीमरी हास्थ्यौँ । शायद मेरी कान्छि नन्दले पनि बेला–बेलामा नछुने हुँदा आमालाई पेल्नुहुँदो हो ।
जसले जे भनेपनि महिनावारीको बिषय अति नै ब्यक्तिगत कुरो हो अरुलाई भन्न जरुरी नै हुन्न । यो महिलाको आत्म सम्मानको बिषय पनि हो । नेपाली समाजमा महिलाको आफ्नो आत्म सम्मान गुमाउन बाध्य पारिन्छ । अर्को अर्थमा बुझौँ न मेरो गुप्ताँगबाट रक्तश्राब भइरहेको छ यतिबेला भनेर परिवारका सदस्यलाई सुनाउनु, गाउँघरलाई सुनाउनु कम्ती लाजको बिषय हो त ? नछुने भएँ या पर सरेँ या पन्छिएँ या महिनावारी भएँ या रजश्वला भएँ भन्नु त महिला हुनुको रहस्य नै गुम्नु हो । म जस्ता कति महिला छन यहाँ, जसलाई यो कुरा अरुलाई सुनाउन बिलकुल मन पर्दैन । उनीहरुलाई यो कुरा गर्नु भनेको उनीहरुको आत्म सम्मानमा ठेस पुग्नु जस्तो हुन्छ । यो कुरा बुझ्दैनन् घरका मानिसहरु । उनीहरुलाई त जान्नै प¥र्यो पर्यो महिला सदस्यको शारिरीक बिकासको चरण । कुन दिन कति स्तन बढे, कुन दिन काखी मुनी रौँ पलाए, कुन दिन देखि नछुने भइ भनि किन जान्नु पर्ने यो समाजलाई ? झन महिला भएर महिलालांई नै ।
म भित्रभित्रै कसैलाई भन्न नहुने गरी उल्कै खुसी भएँ त्यो दिन । ुबुढीमाउ तपाँइको ढोँगी चलन आजबाट सकियो । तँपाइको घरको दुध अब मजाले बुहारीले खाने भएँु भन्थेँ मन मन । तैपनि मुखले भनेर बिद्रोह गर्ने हिम्मत आएन किनभने जेठो दाजुले घरको चलन भनिसक्नु भएको थियो ।
युरोप तिर महिनावारी हुदा छोइछिटो गर्ने चलन देख्दिन । तर बेलाबखत नेपालमा छाउपडी हुन्छ रे लौ न यो भनेको के हो भनेर मलाइ सोध्छन खैरेहरुले । मलाइ एकदम शर्म लाग्छ यो भन्नलाई । खैरेहरुले छाउपडी घरका तस्विर ल्याउँछन । स्तन नछोपिकन फोहरी हातले कँकाल जस्ता बच्चालाई चुसाइरहेका लोत्रेका लाम्टाका तस्विर ल्याउँछन । छाउ घरमा फोहरी कम्वल ओढेका र भैसी गोठको मुखमा पराल माथि सुतेका महिलाहरुका तस्विर ल्याउँछन् । कम्ती शर्म त लाग्दैन मलाइ यस्तो देख्दा । हामीले स्तन छोपेर मात्र स्तनपान गराउँ भनेर सिकाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला । काला हातले स्तन नछेउ बच्चांँलाई दुध चुसांउँदा भन्न पाए । शर्म लाग्ने अर्को बिषय पनि छ धामी या झाँक्री बस्दाको । झाँक्री बस्दा झाँक्रीहरु मज्जाले रक्सी पिउने रैछन । रक्सीले लंठ परेपछि उनीहरु बोल्दा रहेछन् । धामीका कथा पनि त्यस्तै । बुद्दको देश, हिमालको देश भनेर खोक्यो उता जनजीवन यस्तो देख्दा बढो नैराश्यता आउँछ ।
यता तिर महिनावारी भएका दिन मेरो पेट दुखेको छ भन्यो भने त्यो दिन अरु दिन भन्दा कमै काम गरे पुग्ने रैछ किनभने यो लाज र शर्मको बिषयमा पर्दो रहनेछ र महिनावारी हूँदा पेट दुख्ने कुरा स्वास्थ्यको समस्यामा पर्दोरहेछ । यो कुरा मेरा अंफिसका अरु साथिहरुको देखेर मैले चाल पाएकी छु ।
मलाइ लागेको चाँही हाम्रो नेपाली समाजमा यो महिनावारीको बिषय पुरुषलाई बुझाउन सजिलो होला तर महिलालाई बुझाउने उल्कै गाह्रो छ । महिनावारी धुनधानले मान्ने महिलाहरु हेर्नुस त कुरा काट्ने अक्सर तिनै हुन । अर्काको निन्दो चर्चो गर्ने तिनै हुन्छन । पुजा पाठ तिनै बढी गर्छन । बर्त सर्त तिनै बढी बस्छन । पन्चमीका दिन नछुने भएको पाप पखाल्छन् र १०८ वटा तिलका दाना सहित के के हो के के दान गर्छन । १०८ पटक गुप्ताँगमा “चोखो” माटो दलेर पखाल्छन् । १०८ वटा दतिवन टोक्छन । हे भगवान चेतनाको ढ्ंयाग्रो ठोक्न तिनकै कानमा पर्छ जसले यो बदलिँदो परिस्थितिमा पनि थोत्रो थाँग्ने बोकेर कुना पस्छन र छुइ हूँदा पाप गरेको भनेर पुजा गर्छन । तर अरुका कुरा काट्न र परिआए घरै भाँड्न अनि मन्चमा उभिएर महिला स्वतन्त्रताका नारा लाउन पछि पर्दैनन ।
लाग्छ समाजको यो रुढीबादी चलन सजिलै बदलिन्न यदि सरकारले दवाब मुलक कार्यक्रम या नियम लादेन भने । जसले छोइछाइलाई मुद्दा बनाउँछ घर भित्र देउता रिसाउने नाउँमा छिर्न दिँदैन जसले तिनलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्छ त्यसै्याई जेल हाल्ने कानुन ल्याउँ त के हुन्छ । यति भयो र यसमा छाउको कुरो मान्दै नमान्ने बिद्रोही छोरी बुहारी परे भने यो बार्ने चलन पाँच देखि १० बर्षमा नामेट पार्न सकिन्थ्यो ।